Sawirro: Cumar Filish oo shaaciyey sababta uu u furi waayey waddooyinka xiran | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Sawirro: Cumar Filish oo shaaciyey sababta uu u furi waayey waddooyinka xiran
Sawirro: Cumar Filish oo shaaciyey sababta uu u furi waayey waddooyinka xiran
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Finish) ayaa sanad kadib ka hadlay waxyaabaha ka fulay ballanqaadyadii uu sameeyay markii Madaxweyne Farmaajo uu u magacaabay xilkaan.
Cumar Finish waxa uu goobta ka sheegay in sababta uu u fulin waayay ballanqaadyadii uu sameeyay oo qaybta ugu weyn ahayd qaadista dhagaxaanta waddooyinka lagu xiray jid-caddayaasha iyo isgoysyada caasimadda.
“Habeenkii aan xilka la wareegayay 29-kii Agoosto 2019, shacabka waxa ay doonayeen qaadista dhagaxaanta, waxyaabihii aan ballanqaaday ayay qayb ka ahayd, balse way noo suurageli waysay caqabadah amni darteed” ayuu yiri Duqa Muqdisho.
Qaar kamid ah shacabka Degmooyinka Gobolka Banaadir waxa ay sheegeen in xirnaashiyaha waddooyinka waaweyn iyo kuwa dhexmara Xaafadaha dhibaatooyin ku qabaan oo xitaa Maydka aan gaari lagu qaadi Karin, waxaana Dowladda ay ka dalbadeen qorshe xirista ka duwan in ay la timaado.
Maqaal horePuntland oo war ka soo saartay kulankii Deni, A/Madoobe iyo beesha caalamka+Sawirro
Maqaal XigaAqriso: Wararkii ugu dambeeyey kulanka A/Madoobe, Deni iyo MW Farmaajo